စိုးမင်းနိုင်ခေါ် ahisham ဆိုဒ်မှအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်: မောင်စွယ်စုံကျမ်း
စိုးမင်းနိုင်ခေါ် ahisham ဆိုဒ်မှအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်
ဆက်သွယ်ရန် 0102365083 soeminnaing94@gmail.com
ဒီနေရာမှာမိမိတို့ ရေးသားမဲ့ ပိုစ့် အပြည့်စုံရေးပါ
PHONE ဆိုင်ရာ FREE SMS TO MYANMAR နှစ်သက်ရာ လိုအပ်...
photoshop zawgyi found
ကိုရီးယား တရုတ် အာရှ ဇာတ်လမ်းများ မြန်မာစာတန်း ထိုး ကြည့်ရှုနိူင်သည့် ဆိုဒ်လေးပါ
Sulfur's Keyboard V1.0.12 မြန်မာကီးဘုတ်
မြန်မာပြည်သို့FREE SMS ပို့ချင်ရင်
h>ttp:// http://chitoophoto.blogspot.com/ blog နှင့် I T နည်းပညာ
> http:// http://www.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား.... > http://: http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်....
> http://www.thelist.com/countrycode.html#top နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်....
> http://mmastrology.myanmarbloggers.org/ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ်
> http:// http://chitoophoto.blogspot.com/ blog နှင့် I T နည်းပညာ
> http:// http://www.deathclock.com/index.cfm ကိုယ်ဘယ်နေ့သေမလဲ သိချင်ကြပါသလား....
> http:// https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a..... ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း...
> http:// http://sharingtofrds.blogspot.com/ နည်းပညာ အတွက် လေ့လာရန်...
> http:// http://www.myanmarisp.com/computer_ict ကွန်ပြူတာ နဲ့ သတင်း နည်းပညာ..
> http://www.imagechef.com/ ကိုယ့်ပုံလေးတွေနဲ့ Logo / Icon လေးတွေလုပ်ချင်ရင်..
> http://photofunia.com/ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မြင်ဖို့.....
> http://www.topsecretemail.com/Encode_Message.cfm Email တွေကို လုံခြုံအောင် ပို့ကြမယ်..
> http://www.passwordmeter.com/ သင်သုံးနေတဲ့ Password လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လား..စစ်ချင်ရင်...
> http://burglish.googlepages.com/fontconv.htm မြန်မာ တခြားဖောင့်မှ ဇော်ဂျီဖောင့် သို့ ပြောင်းချင်ရင်...
> http://burglish.googlepages.com/testarea.htm မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန်နေရာ...
> http://www.photoshoptalent.com Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ..
> http://delicious.com/ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး website..တွေကို ရှာရန်..
> http://www.mmphotoshop.net Photoshop ကိုမြန်မာလိုလေ့လာဖို့...
> http://www.whatismyipaddress.com Gtalk မှ နိုင်ငံ လိမ်ပြောသူများကို ဖမ်းဖို့...
> http://www.4shared.com/file/80626166/b5161ee5/GTunnel.html?cau2=403..... GTunnel.exe ကိုလိုချင်ရင်....
> http://www.ultrareach.com/ ကျော်မယ် ၊ ခွမယ် ဆိုရင်....
> http://www.yousendit.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၁)
> http://www.sendthisfile.com/ ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၂)
> http://www.send6.com ဖိုင်တွဲကြီးကြီးတွေ ပို့ချင်ရင်...(၃)
> http://www.drhardware.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ..(၁)
> http://www.lavalys.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software...(၂)
> http://www.spadixbd.com/ Hardware ကိုစစ်တဲ့ software ....(၃)
> http://technorati.com/ Blog တွေရဲ့စာရင်းကို ရှာချင်ရင်....
> http://www.alpha.com.mm/alphaprice/alphaprice.php ကွန်ပျူတာ ဈေးနှုန်းတွက်ချင်ရင်...
> http://www.memtest86.com/ Memory ကိုစစ်ဖို့ software......
> http://winkkk.com/glitters14_comments_Hearts_&_Love.html ချစ်သူအတွက် ပုံလှလှလေးတွေ ယူရန်
> http://www.heidi.ie/ Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software........
> http://www.download.com/ThreatFire-AntiVirus-Free-Edition/3000-2239... နဲ့ Virus ကိုရှင်းတဲ့ software.....
> http://www.gadwin.com/printscreen/Print Screen ဖမ်းတဲ့ Software...
> http://www.optimizingpc.com/index.html Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ...
> http://www.abstradrome.com/ Hard Disk ကိုသွေးသစ်လောင်းတဲ့ software..
> http://www.runtime.org/data-recovery-downloads.htm Hard Disk အတွက် Recover လုပ်တဲ့ software....
> http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Partition-Magic..... Hard Disk ကို Partition ချတဲ့ software...
> http://www.heidi.ie/Window ကို မပါစေပဲ Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software...
> http://www.customizetalk.com/ Gtalk အကြောင်းစုံစုံ သိချင်ရင်...
> http:// http://www.vintelligence.blogspot.com/ Java အကြောင်းသိလိုသမျှ..
> http:// http://www.pcworld.com/ ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World)..
> http:// http://www.zwani.com/ ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင်
> http:// http:// http://www.ebooksbank.com/ E-Books တွေကူးဖိူ့...
> http:// http://www.mediaringtalk.com ဖုန်းအလကားပြောရဖို့နေရာ......
> http:// http://www.w3schools.com/ ပရိုဂမ်သမားတွေအတွက်....
> http://www.brothersoft.com/ Software တွေ ကူးမယ်ဆိုရင်...
> http://www.flashvortex.com/index.php စိတ်ဝင်စားစရာ စာလုံးလေးတွေ...
> http:// http://www.books-hive.com မြန်မာ E-books တွေ....
> http:// http:// www.myanmarengineer.org အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေးဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာ..
> http:// http://www.adobetutorialz.com Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရာ
> http:// http:// www.mcpa.org.mm/ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်...
> http:// http://www.reader.google.com Google reader တဲ့ဟေ့... အသုံးပြုနည်းကိုတော့ Blog နံပါတ် 46 မှာရေးထားပါတယ်..
> http://free.avg.com/download-avg-anti-virus-free-edition AVG Antivirus Download အလကားရတဲ့နေရာ....
> http://www.insideoe.com/resources/ Outlook Express ကိုပြင်တဲ့နေရာ...
> http://www.webroot.com/En_US/index.html Webroot Antivirus & Spyware Software ယူဖို့နေရာ..
> http://www.mymyanmar.net/2g/ မြန်မာယူနီကုတ် အကြောင်းလေ့လာဖို့..
> http://isoft.ygn.cc/ မြန်မာ့ ပညာရှင်များကို လေ့လာဖို့...
> http://www.softpedia.com/get/internet/E-mail/Mail/Utilities/Gmail-M..... Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software..(၁)
> http://www.longfocus.com/firefox/ Gmail Manager လုပ်တဲ့ Software ....(၂)
> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:1/cat:5 Download Management လုပ်တဲ့ Software..
> http://www.imtoo.com/dvd-ripper-platinum.html DVD ထဲက သီချင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ Software..(1)
> http://besweet.notrace.dk/ DVD ထဲက သီချင်းတွေ ဖြတ်တဲ့ တောက်တဲ့ Software..(၂)
> http://www.computeractive.co.uk/downloads/backup-and-recovery ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၁)
> http://www.objectrescue.com/download/ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာပေးသော Software..(၂)
> http://www.xilisoft.com/ DVD ဖြတ်တဲ့ Software...
> http://www.mp4converter.net/download.html?ID=1 MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ...
> http://www.dbpoweramp.com/ WAV မှ MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ Software..
> http://www.miksoft.net/comments.htm Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software...
> http://www.cucusoft.com/ DVD ကူးတဲ့ Software တွေ..
> http://www.softpedia.com/get/Antivirus/Trojan-Remover.shtml Trojan (ထရိုဂျန်) ကိုရှင်းတဲ့ Software...
> http://www.infinadyne.com/flashretriever.html Memory Card ထဲမှ ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ သီချင်းတွေ မှားဖျက်မိရင် ပြန်ယူပေးတဲ့ Software..
> http://www.wnsoft.com/ ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတဲ့ Software...
> http://www.freedownloadscenter.com/Search/internet_cleaner.html Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ့ Software...
> http://www.powerkaraoke.com/src/prod_karaokecdgcreatorpro.php ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ Software...
> http://www.lostpassword.com/ Password တွေကို ရှာပေးတဲ့ Software..
> http://www.pcdocpro.com/ PC ထဲက အမှားတွေကို ပြတဲ့ Software ...
> http://www.acronis.com.sg/ Partition ချတဲ့ Software...(၁)
> http://www.partitionmanager.com/ Partition ချတဲ့ Software....(၂)
> http://www.soft32.com/download_151.html Partition ချတဲ့ Software....(၃)...(ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Software..ပေါ့.)
> http://www.styopkin.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပေးတဲ့ Software...(၁)
> http://www.fastphotorenamer.com/ ပုံတွေကို အမည်လွယ်လွယ်ပြောင်းပေးတဲ့ Software...(၂)
> http://www.infinadyne.com/download.shtml CD/DVD ကောင်းမကောင်း စမ်းတဲ့ Software....
> http://www.download3000.com/download_27264.html ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software...
> http://www.manageengine.com/products/desktop-central/software-hardw..... Windows Product Key ကိုရှာတဲ့ Software...
> http://www.messx.net/download.php English - Myanmar အဘိဓာန် Software...(ဖုန်း ၊ PC တွေအတွက်ပါ ရတယ်..ဟဲဟဲ ပိုက်ဆံတော့ ဆောင်ထားပေါ့..)
> http://dictionary.all-channel.com/ English - Myanmar - English Online အဘိဓာန်...(၁)
> http://www.burmese-dictionary.org/ Myanmar-English-Myanmar Online အဘိဓာန်...(၂)
> http://www.ayinepan.com/literature/dictionary/ English - Myanmar အဘိဓာန်စာအုပ်....
> http://www.monywa.org/fonts/index.htm English - Myanmar ဖောင့်များ.....
> http://www.mtvmusic.com/ MTV MUSIC တွေလိုချင်ရင်...
> http://www.keronsoft.com/ ပုံတွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်း နာမည်ပြောင်းတဲ့ Software...
> http://www.acutesystems.com/ Mac မှ Window သို့ ဖိုင်ပြောင်းပေးတဲ့ Software....
> http://www.spadixbd.com/ Program တွေ PC ထဲမှာ နေရာယူတာကို ကြည့်တဲ့ Software...
> http://www.axialis.com/download/iw.html Icon လုပ်တဲ့ Software...
> http://www.softfields.com/ ပုံတွေကို တပြိုင်နက်ကြည့်တဲ့ Software.....
> http://www.lavasoft.de/ Adware ကိုရှင်းပေးတဲ့ Software...
> http://www.irfanview.com/ File အားလုံးကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Software...
> http://www.passmark.com/products/keytest.htm Keyboard ကိုစစ်တဲ့ Software...
> http://www.passmark.com/products/pt.htm Performance ကိုစစ်တဲ့ Software....
> http://www.passmark.com/products/bit.htm PC ကို BurnIn စစ်တဲ့ Software...
> http://www.testlog.com/ Program တွေကို Test Plan လုပ်ပြီးစစ်ပေးတဲ့ Software....
> http://www.passmark.com/products/wirelessmonitor.htm Wireless WiFi လုပ်ပေးတဲ့ Software...
> http://www.passmark.com/products/batmon.htm UPS & laptop computer battery တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software...
> http://www.passmark.com/products/monitortest.htm Monitor မှ CRT & LCD မျက်နှာပြင် ပုံရိပ်တွေကို စစ်ပေးတဲ့ Software..
> http://www.passmark.com/products/modemtst.htm Modem ကောင်း ၊ မကောင်းစစ်ပေးတဲ့ Software...
> http://www.passmark.com/products/soundcheck.htm Sound Card ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
> http://www.passmark.com/products/oscheck.htm Operation System ကိုစစ်ပေးတဲ့ Software...
> http://myanmaritpros.com/profiles/blog/show?id=1445004%3ABlogPost%3..... ISA Server .ကိုမြန်မာလို လေ့လာဖို့.....(၁)
> http://myanmaritpros.com/group/smenetworking ISA server ကို မြန်မာလို လေ့လာဖို့...(၂)
> http://download.cnet.com/Active-SMART/3000-2086_4-10055071.html?par..... Active SMART Software လိုချင်ရင်..
> http://www.brothersoft.com/google-talk-shell-70998.html Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၁)
> http://www.softpedia.com/progDownload/google-talk-shell-Download-71..... Gtalk Shell လုပ်ဖို့ Software....(၂)
> http://portableapps.com/apps/utilities/toucan USB drives တွေအတွက် Password ပေးတဲ့ software..
> လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို Blog နံပါတ် 92 မှာ ရေးထားပါတယ်..။လေ့လာကြည့်ပါ...။
> http://www.malwaresweeper.com/ malware တွေကို သတ်တဲ့ Software...
> http://www.mediafire.com/download.php?ym02owyxyxb Malware sweeper ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့...
> http://www.mediafire.com/download.php?mw20ofgdmll Memory Strick ထဲကဟာတွေကို ဖွတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်....
> http://www.freepdfconvert.com/ pdf ဖိုင်တွေပြောင်းတဲ့ ဆောဝဲလ်......
> httpifile.itdl httpifile.itdl httpifile.itu4kzjd7this_is_a_test.txt) mp3 လုပ်ရန်ဆော့ဝဲရှာ
> http://laughing-kookaburra.ning.com/ ရယ်မောခြင်းငှက်ငယ်...
> http://onlinedoctor.com/ အွန်လိုင်းဒေါက်တာ
> http://onlinepyadaik.com အွန်လိုင်းပြတိုက်လေး
> http://: http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်....
> http://mmastrology.myanmarbloggers.org/ မြန်မာ့ရိုးရာ
> လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကို Blog နံပါတ် 92 မှာ ရေးထားပါတယ်..။လေ့လာကြည့်ပါ...။လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။
> http://www.freepdfconvert.com/ အီမိုဆိုဒ်
> http://laughing-kookaburra.ning.com/ ရယ်မောခြင်းငှက်ငယ်
> http://onlinepyadaik.com (ရသစုံအွန်လိုင်းပြတိုက်)
> http://onlinedoctor.ning.com/ အွန်လိုင်းဒေါက်တာ
> http://www.ning.com Ning ၀က်ဆိုဒ်ပြုလုပ်နည်း
> http://myanmarmultiplyszone.ning.com မြန်မာ မာတီရပ်ဝန်း